Raju Sharma – Bisarjan | Nepali Stories
राजु शर्मा – बिसर्जन
“शायद मट्टितेल सकिएर होकी….. ?” मेरो जीज्ञासामा बाकसको कुनाबाट पांच लिटरको ग्यालन झिग्छ । ग्यालनको पिद सम्म मात्र अस्तित्वमा रहेको मट्टितेल ढल्काएर स्टोभ भित्र चुहाउछ । पुन दम दिन्छ । सलाई कोर्छ । घरर …घररर……स्टोेप दन्किएर बल्न थाल्छ । एउटा थोत्रो तपेश स्टोप माथी बसाल्छ । दुई गिलास पानि तपेशमा खनाउछ । एक चिया चम्चा चिया पत्ति होम्छ । दुई चम्चा चिनी पनि त्यसैमा खनाउछ ।
चिया उम्लन थाल्छ । स्टोप निभाउछ । स्टिलका दुई गिलास सतर्क पार्छ । थोत्रो लुंडो हातमा लिन्छ । तपेशलाई अठयाउछ । चिया खन्याउछ । एउटा गिलास म तर्फ बडाउछ । अर्को आफैं समाउछ । सुरुप्प …. सुरुप्प …. गर्दै चिया पिउन थाल्छ । “ गुलियो त छ हैन् ?” म तर्फ आखां फाल्छ ।
“छ……तिम्रो आत्मीयतामा चास्नी मिसिएको छ ” वास्तबिकतामा ह्दय बोल्छ ।
सधा झै उ थप्छ “ठिकै छनि ! म मरे पछी …..यहि कोठालाई पुस्तकालय घोषण गर ” ।
उस्को त्यो बाक्यले मलाई नमिठो सगं चीमोटछ । पलभरको लागि नरमाईलोले गांज्छ । सांच्चैनै उ मर्यो भने …….? म कल्पनाबाटै पनि नराम्री तर्सन्छु । “यस्तो वाईयात कुरा पनि गर्ने हो मर्न त सबै मर्छन तर पनि पटक पटक मर्दैनन् । एक पल्ट मात्र मर्छन् ।” म उस्को भाबना संग सहमत हुन सक्तिन् । हुन पनि मलाई उस्को त्यो बाक्यले सारै नराम्रो संग चिमोटछ । “मेरो आशय यस्तो थिएन् । यतिका बिधी किताब तिमी पढन भ्याउछौ ?” मैले त यत्ती जान्न चाहेको ।
“मेरो कामै के छ र ? ंंंं…….. जागिर छैन् ……. कोहि आफन्तहरु छैनन् ……, त्यस्तो भ्याई नभ्याई काम पनि त छैन नि ! मन लागेको बेला पढ्यो , मन लागेको बेला सुत्यो ……। एउटा एक्लो जीबन भोगेको मान्छे , …… । ” उ अडकी अडकी भए पनि खुलस्त हुन खोज्छ । उस्को यही खुलस्त हुने बानी मलाई असाध्य मन पर्छ । बानी मात्रै कहां हो….र । उस्को बिगतका भोगाईहरु मेरो लागि बर्तमानमा गहकिलो शिक्षा साबित भएको छ । हुनत मैले प्रत्यक्ष रुपमा उस्को विगतको भोगाईहरु उस्को आफनै मुखबाट सुन्न पाएको छैन् । उस्को पुराना मित्रहरु र दौतरीहरुवाट भने उस्को बारेमा धेर थोर जानकारी हांसिल गर्न पाएको छु । उस्को त्याग र समर्पणको भाबना सुनेरनै म उ प्रति आकर्षित भएको थिएं । उस्को जीबननै एउटा उदाहरणीय त छदैछ । त्यस्मा पनि खुलेर कुरा गर्ने बानिले गर्दा म उस्लाई आदर्शको रुपमा लिने गर्छु ।
“फेरी म सम्पूर्ण किताब खार्दिन ……, किताबको गहिराई सम्म पुग्ने प्रयत्न पनि म गर्दिन ……..। कुनैको मध्य …। कुनैको सुरु ….। कुनैको अन्त्य ..। यसरी किताबको अबस्था मात्र छाम्ने प्रयत्न गर्छु ”। उ आफनो बानिलाई प्रष्टयाई रहेको हुन्छ ।
त्यो दिन राजधानिको मुटुमा अबस्थित पूर्ण कदको शालिकको क्षेवैमा उ पनि उभिएको थियो । ढवङ….ढवाङ….. बन्दुक पटकीएको आबाज सगै उसैको अगाडि भटा भट भङेरा ढले जस्तो मानब लाशहरु ढल्दै गएका थिय । लाशै लाशको चाङनै लागी सकेको थियो । कालो पत्रे सडकको ढाड स्वात्तै रगतले पोतिएको थियो । कोलाहलको बाताबरणमा पनि प्रजातन्त्रको नरा धनकदै थियो । युबा जोस र जांगरकोे अगाडी सामन्ती भाबना मूर्छा पर्दै थियो । कति आमाहरुको कोख रीत्तिदै थिए । कति बाबुहरुको जांगर मूर्छा पर्दै थिए । कति दिदि बहिनीहरुको माईती रीत्तिदैथिए । तै पनि आन्दोलन अगाडी बढदै थियो । आन्दोलनकारीहरु थाकेका थिएनन् । थाकेका थिएत प्रतिगमनकारी आन्दोलनका विरोधीहरु ।
जीबनको उत्तरार्धमा पुगेर उस्ले पाट्र्रीबाट अनुशासन भङग गरेको आरोपमा साधारण सदस्यताबाट निस्कासन गरेको जानकारी जुन दिन पाएको थियो । त्यसै दिन उ सरासर पशुपतिको मन्दिर भित्र छीर्यो । मन्दिरको दायांहुदै सरासर आर्यघाट तर्फ ओर्लियो । घिनलाग्दो गरी बहेकी बाग्मती मूर्छित देखिन्थिन् । जसो तसो बग्ने प्रयत्न गर्दैथिईन् । उस्ले बाग्मतीको ढाड छाम्ने प्रयत्न गर्यो । दुर्गन्दीत भएर मुर्छा परेकी बाग्मती उस्को श्पर्शले ससङिक्त भईन् । दुबैहात फैलाएर स्वागत गर्न सधैं लालायीत यी बाग्मती आज किन ….ससङीत बनिन्….। शयद उस्को शपर्शले हो कि ….?
Tags : Bisarjan Ending Nepali Katha Nepali Stories Raju Sharma
Previous PostGopal Birahi – Kabrastan
Next PostRaju Sharma – Television